I-Loop & Tie: I-B2B Outreach Gifting Manje Isohlelo Lokuthengisa Lwe-MarketExchange | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Mashi 26, 2021 NgoLwesihlanu, Mashi 26, 2021 Douglas Karr
Isifundo engiqhubeka nokufundisa abantu ekukhangiseni kwe-B2B ukuthi ukuthenga kusese siqu, noma ngabe usebenza nezinhlangano ezinkulu. Abenzi bezinqumo bakhathazekile ngemisebenzi yabo, amazinga abo okucindezeleka, umthamo wabo womsebenzi, kanye nokujabulela umsebenzi wabo wansuku zonke. Njengomhlinzeki we-B2B noma umhlinzeki womkhiqizo, ulwazi lokusebenzisana nenhlangano yakho luzovame ukudlula okukhishwa kwangempela.
Lapho ngiqala ibhizinisi lami, kwangishaqisa lokhu. Ngigxile kuphela ekunikezelweni engingakunikeza ibhizinisi ukuze ngithuthukise. Ngangivame ukushaqeka lapho amaklayenti exhumana ukuthi sishesha kakhulu noma senza izinguquko eziningi kakhulu. Ngokuhamba kwesikhathi, ngaqala ukubheka ukuthi ngingahlinzeka kanjani ngenhlangano yabo ngaphandle kokukhishwa kwezitatimende zethu zomsebenzi. Enye indawo kwakuyizipho… izikhumbuzo ezicatshangelwe kahle zokubonga ukwenza usuku lwabo lube lula.
Ezinye bezenziwe ngezifiso, ezinye zihlobene nebhizinisi. Lapho elinye lamakhasimende ami lithuthela endaweni enhle entsha, ngawathenga indawo yokuthengisa ikhofi esebenza ngohlobo olulodwa. Lapho elinye lamakhasimende ami lisungula i-podcast, ngawathenga ikhamera yokusakaza bukhoma. Komunye, ngathenga amathikithi emcimbini wokupha lapho umqeqeshi weNFL wasendaweni wayekhuluma khona. Lapho iklayenti elilodwa linengane yalo yokuqala, ngathenga into enhle ohlwini lwazo lwezifiso.
Ukupha kuyindlela enhle yokuguqula umuzwa womsebenzisi, kepha kufanele kwenziwe kahle. Ngenkathi ngisebenza iphephandaba lesifunda, ngangibuka umnyango wezikhangiso ukhipha amathikithi asenkantolo kubakhangisi abakhulu. Kwakungeyona i- isipho, lakhula laba yithemba. Izipho zenziwe zaba ngezakho futhi zingaguqula ubudlelwano.
Futhi ngivulelekile futhi ngithembekile kumakhasimende lapho engibonga ngokuthi, ekugcineni, akhokhele lesi sipho ngethuba anginike lona.
I-Loop & Tie
ILoop & Tie iyipulatifomu yokubandakanya esiza amabhizinisi ukuxhumana namakhasimende ngobuciko bokunikeza izipho. Ipulatifomu yesipho esuselwe ekukhetheni ithumela injabulo nomuzwa wokubonga obalulekile ebudlelwaneni bamakhasimende obuhlala isikhathi eside. Ngixoxisane nomsunguli wabo, USara Rodell, ku-podcast yethu.
Kusukela ngo-2011, iLoop & Tie ibilokhu iguqula indlela amabhizinisi acabanga ngayo ngezipho. Ukuphazamisa imboni yezipho yamabhizinisi engu- $ 125B, ipulatifomu yezipho ezenzelwe ukukhetha ivumela amabhizinisi ukuthi angene esikhundleni somkhuba wakudala wokuthumela isipho esifanayo esiyisidina, esilingana-sonke kubo bonke abantu.
Esikhundleni salokho, abathumeli bakha amaqoqo ezipho akhethiwe ngezinto ezivela kumabhizinisi amancane angaphezu kwama-500. Abamukeli bese bakhetha into abayithandayo noma bakhethe ukunikela ngenani layo kunhlangano esiza abantulayo, okwenza ukushintshaniswa kwesipho kube umthombo omusha wedatha nokuxhumana.
Vakashela i-Loop & Tie
I-Loop & Tie Salesforce App Ku-AppExchange
ILoop & Tie yethule uhlelo olusha lwe Salesforce. Ngeplatifomu yezipho yamakhasimende kaLoop & Tie, abasebenzisi bangathumela isipho esisodwa noma esingu-10,000 ngemizuzu nje embalwa. Manje isitholakalela ukulanda kusuka ku-AppExchange, abasebenzisi bangafaka ngaphandle komthungo uhlelo lokusebenza kuzimo zabo zeSalesforce bese beqala ukuthumela izipho kumathemba nakumakhasimende khona manjalo.
KwaLoop & Tie, sihlala sicabanga ngezindlela esingasebenzisa ngazo amandla ezobuchwepheshe ukusiza abantu abaningi baxhumane. Umdlandla esiwuzwayo wokubona nokugubha omunye nomunye ngokusebenzisa izipho yinto enhle, engaphelelwa yisikhathi. Ngokunikeza abasebenzisi beSalesforce ikhono lokuthumela izipho ngqo kusuka kuhlelo lwabo lokusebenza, singasheshe sinike amandla isipiliyoni esinjengesomuntu sezinkampani.
USara Rodell, uMsunguli kanye ne-CEO yeLoop & Tie
Abasebenzisi beLoop & Tie abanentshisekelo yokuhlanganisa i-CRM yabo nezipho ezenzelwe ukubandakanyeka manje sebengathembela ku-Salesforce njengesizinda sabo sokulandela ubudlelwano bamakhasimende nokufinyelela. Ngokwengeza izipho njengethuluzi lokuzibandakanya ngaphakathi kwemvelo ye-Salesforce, iLoop & Tie isiza abasebenzisi ukuthi bathuthukise ukufinyelela kwabo kwamakhasimende ngokushintshana okubonakalayo, nokukhumbulekayo.
Ipulatifomu yesipho seLoop & Tie idala umuzwa onengqondo wamakhasimende amamephu ezidingweni zebhizinisi lokwehla nokulandelela. Ukwakha ngaphakathi kweSalesforce kusiza izinkampani ukuletha ukuthinta okucabangayo okuyitshe legumbi lobudlelwano obuqinile, konke ngaphakathi kohlaka olulandekayo olusiza amakhasimende ukukala i-ROI yezinhlelo zawo zezipho.
ILoop & Tie inikezela ngesipiliyoni sekhasimende elenziwa ngabodwa esakha ubudlelwano obuhlala isikhathi eside futhi amaqembu edatha adinga ukuqonda ukusebenza komkhankaso, konke kuseplatifomu eyazi umphakathi ukuthi, ngokunikela, isekela umphakathi wabahlinzeki abahlukahlukene, abahlinzeka ngamabhizinisi amancane.
Bona iLoop & Tie ku-AppExchange
Tags: ukuguqulab2b iziphoukufinyelela amaklayentiCRMukufinyelela amakhasimendeUhlelo lwesiphoiziphoisu lesiphoiluphu nothayiiluphu nothayiukufinyelelasalesforceUSara rodell